Sweden oo sharciga u diiday dad sheeganaya in ay diinta Kiristaanka qaateen | Somaliska
Sweden oo sharciga u diiday dad sheeganaya in ay diinta Kiristaanka qaateen
Magangalyo doon ka soo jeeda wadanka Iraan ayaa Laanta Socdaalka Sweden sharciga u diiday ka dib markii ay sheegtay in sheekadooda aysan ahayn mid la rumaysan karo. Dadkaan ayaa waxay yihiin kuwo ka soo cararay Iran iyaga oo sheeganaya in ay diinta Islaamka ka bexeen oo qaateen tan Kiristaanka.
Waxay telefishinada u sheegeen in Muslimiintu ay dilayaan haddii ay ku noolaadaan Iran, balse Laanta Socdaalka ayaa u muuqata mid aan dhag jalaqsi u siinayn sheekadaas. Mowduuca ah in qofku uu diinta ka baxay oo la dilayo ayaa ah mid ka badbatay shaqaalaha Laanta Socdaalka iyaga oo diidmo ka safay dadkaan ka soo jeeda Iran.
Laanta Socdaalka ayaa u sheegtay dadkaan in Iran lagu celinayo oo haddii ay naftooda u cabsanayaan ay yiraahdaan Muslimiin ayaan nahay. Waxay ku doodeen in dalka Iran uu yahay mid toogasho ku xukuma dadka diinta ka baxay.
Ma ahan markii ugu horeysay ee qof sheeganaya in uu Islaamka ka baxay diidmo la siiyo. Sidoo kale wadanka Norway ayay ka dhacday nin Afghanistan ka soo jeeda in diidmo la siiyay, ninkaas ayaa markii dambe ay isdagaaleen nin Soomaali ah oo uu midi ku dilay.
Subxaanallah kuwaan dhankasta wey ku qasaaren allaha duleeyo.
aad ayaan ugu faraxsanahey in diidmo la siiyo weliba wax ka xun ayaa la rabey in lagu sameeyo ma oga miyaa kuwani in wax walbo amarka ilaah ku socdo ilaah ayey ku kufriyeen insha allaah ciqaabtooda waa arkayaan qofkasta oo ilaah ku kufriyo aduunkana xiriiri ayuu ku jirayaa akhiro waxaa sugeyso cadaabka ilaah haddii inta uu nool yahey uusan ka soo laaban kuwaan ilaah waxaan uga baryaa haddii toobad u qoran tahey ilaah jidka toosan ha ku soo celiyo haddii gaalnimo u qoran taheyna ilaah ha qabto ciqaab degdeg ahna ha tuso diinteena islaamka sharafta leh naxariista badan umadda u gargaarto ilaahna dhexdeena raxmad dhigey ayey ka been sheegeen
Waxaana macquul ah iney rabeen sharci in lugu siiyo keliya ayba been eheed. Sheegashadooda , ha loo celiyo Ahmadinejad haka shaqeestee
Xaqiiqadu waxaa ay tahey in dadku aysan fahamsanyen sharciga lagu bixiyo deganaashada. Dadka qaar ayaa waagii aan imaanaayey Sweden 3sano ka hor igu yiri iska siib dharka qurxoon, ha qaadan computer, ha oran waxbaan soo bartey, yaanan lagugu arkin wax lacag ah iyo waxyaabo badan oo yaab leh.
Xaqiiqadu waa in ay bixintu xagga rabbi ka timaaddo, is dulleyn waa wax xun horumarna laguma gaaro. Kuwan ciqaab adduun iyo mid aakhiraba waa mutteen haddii ay jirto sidan. Laakiin dowladdaan aan lajoogno intelegence-gooda ama sir doonkoodu laga yaabo inuu tixraacayo aragtida ah in dadkani aysan aheyn kuwa sheeganaya waxa ay sheegayaan ee ay yihiin sir doon. Waayo waddanka Iran reer galbeedku si sahal ah ma u aamini karaan. Ninka usameeyey Pakistaan hubka wax gumaada waxaa uu ku bartey Netherland isagoo sheeganaya inuu convert sameeyey. Ilaahey xaqa hana waafajiiyo…..
ha la daldalo marka dib loo celiyana, hadiiba diintisii uu siisan rabay sharci
isdulayn hadii wax lagu helayo somali ayaa isdulaysay, markay wadanmada qurbaha tagaan ayeey jaahiliin iska dhigaan aqoontooda qariyaan. waa waxa hada meelkasta looga quursanayo..mana qoraan mana aqriyaan loodhaho.ama isdulee ama ha isdulayn go,aanka waa midka alle. gaal ku calaacal mise haku calaacalin waxba gacanta kuma hayaan. arinka iyo go.aanka waa mid allaah xagiisa kasoofula,marka go,aan khyr qaba allaah xagiisa ayaan kasugaynaa. gaal waxba nooma hayo
subxanaallah miyaanay ogaayn marku urka hooyadii kubeermay in illahay irsaqaadisa qooray
layla hadalkaada waa dhab walhi meel kasta waa ku qasareen waayo shegashada diinta kristianka ma sahlana ayago oo ku fakarayan in ay wax ku helan ayey ku wayen waana dhibato walhi dad markii hore muslim aha oo hadane shegtay kristian allaha idinma sahlo
April 3, 2013 at 22:54
subhan allah ma sweden darted bey uga baxen diintooda mcn inee qatan ceer daraated
inaa lillaahi wa inaa ilaahey raajucuun iimaankaa qani lagu yahey ilaahey iimaanka hanoo sugo iyagana ilaahey ha soo hanuuniyo xaqa ilaahey ha tuso
aad baa idin salamayaa dhamaantin qolyaheeni 2sano laguhestay ayamahan yaa wax cusub hayaa hadi wax sokordheen wax jeclaan lahaa ina ino so qortaan aadna waa umahadsantihin asc
subxaana laah ilahauow ada wen oo waxid ah wa ey ku ficaantahy inlodido wayo wax walbo ilaah aya dadka siyo carada ilaah aya kudhacday ilaahna uma sahlo waligod dad badan oo kutala juray jidkas qalocan aya ku wana qadanayo allow diinteyna hudanka nagu dil amin
soomaali hadanhy nafteena ayaan been kasheknee abaay iiraan diintii ayeeba kabaxeen karishtaan aanahay subxanallaaahi illlahay ba ku awood leh arintaa wax aan dhihi karno malaha sharci diin kabax leeskuma siiyo ee kasoo qaadka illahay ayaa leh xumaan wax lakuma raadiyo sidaan udhahenay wax ma qorno mana aqrino ayaa dhibato naga hesataa
xasbun allah duliyiin waaye
iimaan laaan ayaa haysta ilaahow umadeena muslimka ah ka badbaadi waxa ay diin kale u doortaan teenaa nasteexa ah ilaahow diinteena islaamka adkeey insha alaah.
sxb waxa la hela daad somali ah oo saas ku maray dacwo ama rabo ama dhaho qaar waa nala soo xoogay ama qaar waxa aan nahay qaniis ma is muujin karno ajnabiga kale yaan la yabin anaga daad saas subiya aa naga buuxo ok kkkkkk